နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက် Chat ပေးမယ့် Quartz – AsiaApps
နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက် Chat ပေးမယ့် Quartz
April 11, 2018 April 11, 2018 fairyReviewsNo Comment on နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက် Chat ပေးမယ့် Quartz
ဒီတစ်ခါတော့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလဲ ဖတ်ချင်တယ် အချိန်လဲအများကြီးမပေးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက် အရမ်းအဆင်ပြေမယ့် app လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Quartz လို့ခေါ်တဲ့ News app လေးဖြစ်ပြီး App ဆိုဒ်က iOS မှာ26 MB နဲ့ Playstore မှာ 3.7 MB ပဲရှိတာမို့လို့ စက်မလေးပေမယ့် up-to-date သတင်းတွေဆိုတော့ အင်တာနက်လေးတော့ လိုတာပေါ့နော် ?
အင်တာနက်လိုတယ်ဆိုပေမယ့် သိပ်လဲစိတ်ပျက်မသွားပါနဲ့ဦး။ သူလိုတဲ့ အင်တာနက်ဆိုတာကနည်းနည်းလေးဆိုမှ တကယ့်ကိုနည်းနည်းလေးပဲမို့ ဘေလ်စားမှာစိုးရိမ်တဲ့သူတွေအောင် အေးဆေးဖြစ်သွားမှာနော်။ Quartz ဆိုတာက သတင်းတွေကို သူများနဲ့လုံးဝမတူနဲ့နည်းတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်ပြီး လုံးဝနောက်ဆုံးရသတင်းကြီးတွေကိုပဲ တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။ (မြန်မာပြည်ကသတင်းတွေတော့ မပါပါ။)
ဘယ်လိုသုံးရမလဲ ဟုတ်လား? စိတ်မပူပါနဲ့ ဘာဆိုဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ app လေးကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ တိုတိုနဲ့လိုရင်းသာရေးထားတဲ့ သတင်းလေးတွေကိုအလိုအလျောက် message ပုံစံတစ်ခုချင်းပို့ပေးမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ်အသေးစိတ်ဆက်ဖတ်ချင်တဲ့ သတင်းမျိုးဆိုရင် click လေးတစ်ချက်နှိပ်ရုံပါပဲ။ ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ချိန် သတင်းတွေအသစ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် အပျင်းပြေ quiz လေးတွေလဲမေးပေးတာမို့ မပျင်းရတော့ဘူးလေ။ အဲ့ quiz လေးတွေကိုလဲ အထင်မသေးနဲ့နော် ပေါချောင်ကောင်းတွေမဟုတ်ပဲ တကယ်ကို ဗဟုသုတရစေမယ့် ဉာဏ်စမ်းလေးတွေပါ။
တကယ့်အရေးကြီးသတင်းတွေမျိုးဆို notification တက်အောင် setting လုပ်လို့ရသလို email ပို့ထားဖို့လဲရွေးလို့ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေနဲ့သင့်တော်ပြီး မျက်စိအားနည်းသူတွေအတွက်စဉ်းစားပေးပြီး စာလုံးကိုအသေးအကြီးရွေးလို့ရအောင်တောင် လုပ်ပေးထားတာနော်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် Apple editor’s choice ဆုကိုရထားတဲ့အပြင် 2016 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး app ၁၀ခုစာရင်းမှာပါခဲ့တဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး CNET’s ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး app စတဲ့ ဆုတွေအပါအဝင် ဆုပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ application လေးတစ်ခုဆိုတော့ ဘာလိုသေးလဲပေါ့နော်။
နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို အသေးစိတ်မဟုတ်တောင် သိသင့်သလောက်သိထားချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ အသေးစိတ်သိထားချင်တဲ့သူတွေ ချက်ချင်းသာ ဒေါင်းထားလိုက်တော့နော် ?
Download link >> iOS, Android
iPhone တွေမှာ Touch ID, Face ID, password တို့နဲ့ lock မဖြည်ဘဲ Siri နဲ့ ဓာတ်ပုံ ဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲ